Xidhibaanka Soomaaliga ee loo doortay baarlamaanka Yurub oo laga codsaday inuu dibadda u baxo | Xaysimo
Home War Xidhibaanka Soomaaliga ee loo doortay baarlamaanka Yurub oo laga codsaday inuu dibadda...
Xidhibaanka Soomaaliga ee loo doortay baarlamaanka Yurub oo laga codsaday inuu dibadda u baxo
Xildhibaanka xisbiga Green u matala baarlamaanka Yurub ayaa ku dooday in laga codsaday in dibadda uga baxo dhismaha baarlamaanka Yurub oo ku yaalla Strasbourg, iyada oo ay maalinti ugu horreysay uu soo shaqo galo ay u ahayd.
Majid Majid, oo 30 jir ah wuxuu xirnaa koofiyad iyo funaanad uu ku soo qoray ‘Faashistinimadu duf ha ku baxdo’ xilliga laga dalbaday inuu baarlamaanka uu ka abaxo.
Duqi hore ee Sheffield ayaa ka mid noqday lixda xildhibaan ee Yorkshire ee deegaanka Humber uga qayb galeyso midowga yurub.
Baarlamaanka Yurub wuxuu sheegay iney jirin cid ka mid ah shaqaalaha oo dhacdadaasi ku lug lahayd.
“Mr Majid wuxuu dhankiisa ka sheegay qofka ka codsaday inuu dibadda u baxo inuusan garaneyn qofka uu yahay, balse wuxuu sheegay inuu u maleynayo inuu qof mas’uul ahaa.”
“Wuxuuna sheegay inuu qofku uu weydiiyey inuu soo hababay, kaddibna wuxuu iga codsaday inaan baxo” ayuu yiri.
Boggiisa Tweetarkana wuxuu ku qoray: “Waan ogahay inaan anigu dadka ka duwanahay. Balse ma dooneyn inaan qariyo waxa aan ahay. Madow ayaan ahay magaceygana waa Magid.”
“Ma doonayo inaan isku dayo, balse waxaan rajeeynayaa inaan ku habboonaado.”
Ereyada aan isdhaafsannay wey badnaayeen, waxa ay dadku ka aaminsan yihiin siyaasiyiintana waa halkeeda laakiin anigu dhismaha inaan ka baxo la iga dalbaday kama bixin oo waan ku sii sugnaaday.
Afhayeen baarlamaanka Yurub u hadlay wuxuu sheegay: “Arrinta waan baareynaa si weyn ayeyna noo saameysay waxaanna si kalsooni leh aan u sheegi karaa inuusan dhacdadaasi wax lug ah ku lahayn shaqaala ka tirsan baarlamaanka.”
Mr Majid xilliga inuu baarlamaakna ka baxo la codsanayey wuxuu ka qayb galayey shirka furitaanka baarlamaanka midowga yurub oo muddo shan sana shaqeeynaya oo shaqadiisa billaabay, waloow ay ka sii mid ahaanshaha Britain ee baarlamaanka yurub ay su’aal ka taagan tahay.
Xubnaha UK u matalaya baarlamaanka Midowga Yurub waxay baarlamaanka ka sii mid ahaanayaan tani inta ay Britain si rasmi ah uga baxeyso Midowga yurub.
Sida uu ku yimid UK.
Waxa uu markii ugu horeysay magaalada Sheffield yimid isaga oo ay da’diisu ahayd shan sano jir. Waxaa uu xilligaas la socday hooyadii iyo 5 walaalihiisa ah, waxayna si qaxootinnimo ah ku galeen dalka Britain.
Maajid iyo qoyskiisa ayaa ka hor inta aysan UK imaan, waxay muddo lix bilood ah ku jireen xero qaxooti oo ku taalla dalka Itoobiya. Maajid Maajid wuxuu ku dhashay magaalada Burco.
Waxaana Mr Magid laga soo doortay Broomhill iyo Sharrow 2016-kii, wuxuuna noqday ninki ugu da’da yaraa oo magaaladaasi mmaayar ka noqda 2018-kii.
Maajid ayaa mar uu wareysi bixiyay sheegay, in uusan wax badan ka xusuusan yaraantiisii islamarkaana uusan dib ugu laaban dalkii uu ku dhashay.
“Waxa aan xusuustaa in aan faraxsanaa oo aan iska ciyaari jiray si la mid ah caruurta kale,” ayuu yiri.
Maaid wuxuu ka baxay jaamacadda Hull ee ku taalla dalka UK.
Wuxuu sheegay in noolashu ay adkayd markii isaga iyo qoyskiisa ay yimaadeen UK, sida barashada luuqadda iyo in ay nolasha cusub la qabsadaan.
Trump ayuu ka mamnuucay Sheffield
Maajid Maajid ayaa dad badan ka yaabiyay ka dib markii uu magaaladiisa uu Duqa ka yahay ee Sheffield uu “ka mamnucay” madaxwaynaha Mareykanka Donald Trump in uu soo booqdo xilli uu safar ku joogay Britain.
Maajid ayaa ku dhawaaqay go’aankan mar uu shir gudoominayay golaha deegaanka Sheffield “taasi oo walaaltinimo loogu muujinayo dadka reer Mexico”, sida uu sheegay.
Waxa uu xilligaa Mr Trump ku tilmaamay “nin nacas ah” islamarkana laga mamnuucay magaalada” qiimaha badan” ee Sheffield.
Balse waxaa xilligaa ka so horjeedsaday qaar ka mid ah golaha deegaanka magaalada Sheffield oo sheegay in uusan lahayn awood sharci oo uu Trump kaga mamnuuci karo booqashada magaalada.
In kastoo ka mid ahaanshiyahiisa baarlamaanka Yurub ay waqti kooban ahaan doonto maadaama Britain ay ka baxayso Yurub 31 October – ayaa hadana Maajid Maajid waxay u tahay fursad dheer iyo horumar.